Imbali ye-110 sqm yeholide yekhaya laseZur Hofreite
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTamara Und Heiko
Ikhaya lethu leeholide likwimeko entle, kodwa likumbindi weMainz. Indlu yakhiwa ngenkulungwane ye-19 kwaye yalungiswa ngothando kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo. Uya kufumana yonke into efunwa yintliziyo yakho. Inendawo entle, enelanga kwaye ezolileyo, ngaphantsi komzuzu omnye ukwiMain. Ungathatha ibhasi ukuya edolophini eMainz ngemizuzu eyi-10. Hlaziya kwi-terrace enkulu kunye nombono wemithi ye-linden.
Indlu yethu ibekwe ngqo kwiCawa entle yaseSt. Kilian kwaye udonga oludala lwecawa luyinxalenye yodonga lwangaphandle lwendlu yethu. Ke uhlala kwisakhiwo sembali esinochuku lomntu. Nangona "iindonga ezidala" uya kumangaliswa yimpahla, iiplanga eziphakamileyo kumgangatho ophantsi kunye neeplanga eziveziweyo ziyinto ekhethekileyo kakhulu. Uya kufumana enye okanye enye iqhekeza lomyili kubandakanya i-75 intshi yeTV ene-Ambilight. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, akunyanzelekanga nokuba uze neziqholo zakho kunye nekofu.
Kupholile kunye nathi kwaye ngokuqinisekileyo uya kuziva ukhululekile kakhulu. Ngokukodwa xa uhleli kwindawo enkulu yendlu kwaye ujonge kwimithi yemithi ye-linden engabamelwane, unokwenza ingqondo yakho ibhadule. Ngaphantsi komzuzu omnye uselunxwemeni lweMain kunye nePeninsula entle yaseMaaraue enechibi elikhulu langaphandle kanye emlonyeni weRhine-Main river.
Usahlala kumbindi wesixeko, njengoko unokufika eMainz, eWiesbaden naseFrankfurt ngokukhawuleza okukhulu ukusuka kwindlu yethu. Izithuthi zikawonke-wonke zanele kwaye zikufutshane kakhulu. Inani leevenkile kunye neeresityu nazo zinokufikelelwa ngeenyawo ngemizuzu nje embalwa.
Ukuhlala kwale mihla kwindlu eyimbali esiyinike iinkcukacha ezininzi, khawuzame! Singavuya kakhulu ukukwazi!
Umbuki zindwendwe ngu- Tamara Und Heiko
Sihlala kwizakhiwo ngokwethu, ngoko sihlala sifumaneka kuwe kunye nemibuzo yakho. Sithanda ukunika iingcebiso zohambo, iindawo zokutyela kunye nemisebenzi.
UTamara Und Heiko yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mainz